Is bedel siyaasadeed oo soo food saaray Dalka Kenya | maakhir.com
Is bedel siyaasadeed oo soo food saaray Dalka Kenya
Nairobi:- Magaalada Narobi ee xarunta Dalka Kenya ayaa waxa soo food saaray is bedel siyaasadeed oo aad u xoog badan, iyada oo ay halkaasi maalintii shalay ahayd galinkii danbe lagu dhawaaqay inuu Madaxtinimada Dalka Kenya ku guulaystay Hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mwikibaki, sida ay ku dhawaaqeen gudiga Doorashada Dalka Kenya loo xil saaray.
Raila Odinga ayaa gaashaanka ku dhuftay inaanu haba yaraatee aqoon sanayn Natiijada ka soo baxday Doorshadii Dalka Kenya isaga oo sheegay inay tahay mid lagu soo afmeeray wax is daba barin iyo musug maasuq baahsan, waxa kaloo uu sheegay inay Gudiga doorashada Dalka Kenya loo xil saaray ay u xaglinayeen dhanka Kibaki.
Raila Odinga ayaa ku eedeyey dadka ka ag dhow Mr Kibaki in ay isku deyayaan in ay majaraha habaabiyaan codadka dadweynaha Kenya, waxana uu sheegay in aanu sinaba u aqbali doonin natiijada ay ku dhawaaqeen guddiga doorashadu, uuna beesha caalamka ugu baaqayo inay soo faragaliyaan arintaasi si doorasha kale oo xalaal ah loo qabto.
Dhanka kale Xisbiga uu hogaamiyo Mr Raila ayaa sheegay inay maalinta bari ah qabanayaan Dibad baxyo balaadhan oo ay kaga soo horjeedaan Doorshadaasi, iyaga oo waliba sheegay inay Madaxtinimada Dalkaasi ay u aqoon san yihiin Hogaamiyahooda Rila Odinga.
« Raisalwasaare Nuur Cadde oo sheegay inuu 48-Saacadood gudahood ku soo dhisayo xukuumada Cusub
C/laahi Yuusuf ayaa maanta soo gaadhay magaalada Baydhabo ee fadhiga Baarlamaanka Somaliya »